တိကျချောမွေ့စွာပြွန်၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို - Kuanyu သံမဏိ Co. ,, Ltd.
နေအိမ် » တိကျချောမွေ့စွာပြွန်၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို
ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချခြင်းကြောင့်, အများအပြားဖောက်သည်တိကျချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်မှမူရင်းအအေး-ရေးဆွဲချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်ဝယ်ယူရာမှပြောင်းလဲပြီ. ရဲ့တိကျချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုမှာကွညျ့ကွစို့:
အားသာချက်များ: 1. မြန်နှုန်းဖွဲ့စည်း Precision ချောမွေ့စွာပိုက်အစာရှောင်သည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု output ကိုမြင့်မားသည်. ယင်းအပေါ်ယံပိုင်းမထိခိုက်စေဘဲ, Cross-အပိုင်းပုံစံများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီစေနိုင်ပါတယ်. 2. ချမ်းကိုလှိမ့်လုပ်ငန်းစဉ်တိကျသံမဏိပိုက်အသီးအနှံကြီးမားသောဆန့ပုံပျက်သောဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, အဆိုပါတိကျစွာသံမဏိပိုက်များ၏အထွက်နှုန်းအမှတ်တိုးတက်ရာ. 3, အဆိုပါတိကျစွာသံမဏိပိုက်များ၏တိကျမြင့်မားသည်, ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူစွန့်ပစ်၏မျိုးဆက်လျော့နည်းစေကြောင်း.
အားနည်းချက်များ: 1. ကျန်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတိကျချောမွေ့စွာပိုက်၏အပိုင်းတွင်တည်ရှိ, အရာတိကျချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်၏ခြုံငုံနှင့်ဒေသခံထိကပေါက်ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်သက်ရောက်မှု; 2. တိကျသံမဏိပိုက်၏အပိုင်း၏လွတ်လပ်သော torsional ကျောမှုအတော်လေးနိမ့်သည်; 3. အေး-ရှင်းပြီတိကျချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်အဆိုပါဖွဲ့စည်းနံရံအထူသေးငယ်သည်, နှင့်ဒေသခံတစ်ဦးစုစည်းဝန်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်စွမ်းမလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်.